Schedule : Wed, Thur, Fri, Sat (9:00 AM to 12:00 PM)
Duration : 1 Month (63 Hours)
Class Code : S1st-obm2-33-01
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Own Business Management Level 2
မိရိုးဖလာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မလုံလောက်တော့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် Own Business Management (Level 2: Manage your business)ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်အနေဖြင့် မိရိုးဖလာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲလာရာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော စီးပွားရေးဈေးကွက်တွင် မိမိလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်လာပါသည်။
Strategy First University တွင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများအတွက်Certificate in Own Business Management Level 2: Manage your Business ထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
မိမိ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကိုစနစ်တကျ ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲ? သင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ဘယ်လို နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေမလဲ?
လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို သေချာနားလည်ထားမှသာ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကို ဆက်လက် ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများမှလည်း လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်များ ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသဘောတရားများ၊ စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများ နှင့် မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ အရှုံးအမြတ်စာရင်းတွေ၊ ဈေးကွက်တွင် ထိုးဖောက်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော ကြော်ငြာများ နှင့် အရောင်းမြှင့်တင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ များကို လည်းသင်ကြားပေးသွားပါမည်။
ထို့အပြင် လုပ်ငန်းထဲတွင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် လည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောတရားများ၊ ဝန်ထမ်းပိုင်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းအကြောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးမှ အတွေ့ကြုံရှိ
ဝါရင့် ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးသွားပါမည်။
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ သင်တန်းကာလ (၁) လသာ အချိန်ပေးပြီး တက်ရောက်ရန် သီးသန့်စီစဉ်ထားသော Certificate in Own Business Management level -2တန်းခွဲသစ်တွင်
လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါသောကြောင့် စာရင်းပေးသွင်းပြီး ကြိုတင်အပ်နှံထားနိုင်ပါသည်။
Certificate in Own Business Management ၊ Level 2: Manage your business (63 hours)
1.Soft Skills for Business Owners – စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းရည်များ၊
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်, Ph.D (Manchester), Former President’s Economic Advisor
2. Managing Human Resources - လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဥမ္မာမြင့်, Ph.D (HRM, Delhi), M. Com, B. Com (Hons, YIE)
3.Managing Finances - ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း
ဒေါ်ခင်နွဲ့အုန်း , M. Com, B. Com (Hons, YIE)
4.Principles of Management - စီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတရားများ၊
ဒေါ်အေးအေးဝင်း , M.A (Int’l Business Studies, Sophia), M. Com, B. Com (Hons, YIE), Diploma in English
5.Managing Manufacturing & Operations - ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
ဒေါ်အေးအေးဝင်း, M.A (Int’l Business Studies, Sophia), M. Com, B. Com (Hons, YIE), Diploma in English
6.Managing the Markets - ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
Lecture (1). ဒေါက်တာ ဦးစိန်မင်း, Ph.D Marketing (Passau, Germany), M. Com, B. Com (Hons,YIE), (Academic Director , Strategy First University)
Lecture (2), ဦးအောင်ချစ်ခင် , MBA (Nottingham), PG Dip M, Dip M (CIM, UK) (Founder/ Managing Director (Strategy First University)
ဘာသာရပ် ၆ ခုကို လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ခြုံမိအောင် သင်ကြားပေးပါမည်။
OBM Workshop Series တွင်
Level 1: Start လုပ်ငန်းသစ် စတင်ခြင်း
Level 2: Manage လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
Level 3: Grow လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသင်တန်းသုံးမျိုးခွဲခြားသင်ကြားပေးပါသည်။ လက်ရှိဖွင့်လှစ်သောအတန်းမှာ လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေသူများ နှင့် လုပ်ငန်းရှိပြီးသားလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် - ဆေးလိပ်၊ ဘီယာ၊ အရက်ကုမ္ပဏီများ၊ အချို့ MLM ကုမ္ပဏီများနှင့်၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများကို ဝန်ဆောင်မှုမပေးပါ။
Strategy First ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများအတွက် သင်တန်းကြေး (၁၀%) ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။
- Strategy First တွင် ICM BMA တက်ရောက်ပြီးသောကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများ အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားပြီး တက်ရောက်လိုသူများအတွက် သင်တန်းကြေး- ၂သိန်း သက်သာပါမည်။
- SME Registration Card ရှိသူများ အနေဖြင့် (၅၀၀၀၀) သောင်းကျပ် Discount ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
-ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများ၏သူငယ်ချင်းများ၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများတက်ရောက်လိုပါကလည်းသူငယ်ချင်း Refer (၂)သောင်းကျပ် လျော့ပေးပြီး သူငယ်ချင်းကျောင်းအပ်ပြီးပါကလည်း ကျောင်သားဟောင်းများအနေဖြင့် ကျောင်းတွင်လက်ဆောင်ပြန်လည်ထုတ်ယူပါသည်။